Booliska Jubbaland oo soo bandhigay rag ka shaqeyn jiray sameynta lacagaha been-abuurka ah
Booliska dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa maanta saldhigga Booliska ee magaalada Kismaayo maanta ku soo bandhigay laba nin oo lagu eedeyay in ay aysameyn jireen lacago been abuur ah. Saraakiisha Booliska ayaa sheegay in ay heleen xog dheeraad ah shacabkana ay aad ula shaqeyeen taasna ay sahashay in la soo qabto ragaan. Waxaa jira hawlgallo is daba joog ah...
(Sawirro) Yuusuf Garaad Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo safaaradda Soomaaliya ee Kenya booqday
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo dhawaan soo gaaray dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa booqday safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan magalada Nairobi. Qunsulka la magaacabay ee cusub Cabdiraxmaan Aadan Cusmaan (Kaampala) ayaa wasiirka ku soo dhaweyay safaaradda. Yusuf Garaad ayaa wada qorshe uu ku booqanayo...
Madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho u safray
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta u safray magaalada Muqadisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in uu ka qeyb galayo shir loogu gogol xaarayo shirka ka dhici doona dalka Britain oo looga hadli doono arrimaha dhawr ah oo ay ugu muhiimsan tahay dhanka amnigga. Shirka ka furmi...
Dowladda Federaalka oo markii ugu horeysay ka hadashay Koox Diimeedka Al-saaciduuna Bil Xaq
War Qoraal ah oo uu soo dhigay Bartiisa Facebooka Wasiirka Warfaafinta Xukumadda Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayuu ku sheegay in Koox Diimeedkaan ay yihiin kuwo Adeegsanaya Afkaar Khaldan oo ka been sheegaya Diinta Islaamka ee Suuban. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in Kooxdaan ay ka digeen Culimadda Soomaaliyeed islamarkaana Dowladda Soomaaliya...
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo maanta Muqdisho soo gaaray
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho, loogu soo dhaweeyay. Guddoomiyaha cusub ayaa markii la magacaabayay ku maqnaa dalka Mareykanka oo uu todobaad ka hor aaday, isagoo aan wax xil heyn markaas, hase ahaatee maanta dib ugu soo laabtay dalka, isagoo xil haya. Taabid ayaa ahaa Safiir...
Saldhig ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen Jubbada Hoose oo la bur-buriyay
War dhawan soo baxay ayaa sheegaya in duqeyn dhanka cirka ah lagu qaaday saldhig ay kooxda maleeshiyadda Al-Shabaab ku lahaayeen Gobolka Jubbada hoose gaar ahaan deeganno hoos yimaada Degmadda Badhaadhe. Xero tababar oo si qarsoodi ah ugu taalay duleedka Tuulada Beernaaseey oo hoos tagta degmadda Badhaadhe ayeey diyaaraddo dagaal oo ay dowladda Kenya leedahay bur-buriyeen. Goobjoogeyaal...
Madaxweyne Farmaajo “Al-Shabaab laba sanno gudahood ayaa dalka kaga saaraya”
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Maanta Qudbad ka jeediyay Munaasabad lagu Xusayo Aas-aaska Ciidamada Xoogga Dalka oo ka dhacday Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in Shabaab laga saari doono Dalka islamarkaana Labo Sano lagu soo Afjari doono Dagaalka Shabaab. Qeybo kamid ah dalka oo ay kamid yihiin degmooyin Muhiim ah ayeey Al-Shabaab...
Wasiir Maryam Qaasim “Amisom ayaa si wanaagsanayn iila dhaqantay”
Wasiirka gar-gaarka iyo arrimaha Musiibooyinka ee dowladda Soomaliya Marwo Maryam Qaasim ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay hadal ay ku tilmaamtay in ciidamadda AMISOM ee waardiyeeya xerada Xalane ay si xun ula dhaqmeen. “Anaga oo ku shaqayna xaalad adag ma ahan in sidaa ay ciidanka AMISOM noola dhaqmaan wax saxsana ma aysan nagu sameyn aniga iyo gabara xafiiskeyga...
Warbixin: Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi “Farmaajo” ayaa dalka dib ugu soo laabtay keddib markii uu soo dhameystay safar shaqo oo uu ugu maqnaa dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Farmaajo ayaa intuu uu booqanayay dalka isutagga Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ugu sarreeysa dalkaasi...
Maxkamad ku taal dalka Sweden gaar ahaan caasimadda dalkaas ee Sttolkhom waxaa ka soo hor muuqday Rakhmat Akilov oo ah 39 sano jir ka soo jeeda wadanka Uzbekistan. Rakhmat ayaa maxkamadda ka hor qirtay in uu ka dambeeyay mas’uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Stolkhom ee dalka Sweden, weerarka waxaa lagu fuliyay gaari xamuulka qaada oo dad shacab ah la dul mariyay. Inta...
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa kula kulmay Caasimadda Abu Dhabi, Dhaxalsugaha Abu Dhabi ahna Abaanduulaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kulanka oo ahaa mid albaabada u xirnaayeen, kana dhacay qasriga badda, ayaa looga wada hadlay xiriirka walaalnimo...